​आफुले पढेको स्कुलमा स्टेज निर्माण गरिदिदैं सुन्दर
उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा सञ्चालित स्कुलमा स्टेज निर्माण हुने भएको छ । मोरङ उर्लाबारी—९ खोपिँडाडा निवासी युवा समाजसेवी सुन्दर श्रेष्ठले पहिले आफुले अध्ययन गरेको स्थानीय प्रभात निमाविमा मञ्च निर्माण गरिदिने भएका हुन् ।
विद्यालयमा कार्यक्रम गर्न सहजता होस भनेर आफ्नो एकल लगानीमा उनले विद्यालयमा....
​जन्मदिनको अवशरमा मुटु रोगीलाई सहयोग
ताप्लेजुङ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आफ्नो जन्मदिनको अवशरमा आफ्नो गृह जिल्ला ताप्लेजुङका मुटुरोगी बालकलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।बुधबार सचिव भट्टराईले फुङ्लिङ नगरपालिका ९ हाङ्देवाका मिलन शेर्पाको उपाचारका लागि नगद १५ हजार उपलब्ध गराएका हुन् । बिरामी बालको मुटुको ुईवटा भल्ब फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको....
​रायमाझी चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ को अध्यक्षमा
इटहरी । अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघको प्रदेश नं. १ को अध्यक्षमा कलाकार तथा निर्देशक केशव रायमाझी चुनिएका छन् ।
भदौ २० गते दमकमा सम्पन्न प्रथम भेलाबाट उनी अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । उनको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटि चयन भएको छ ।
किन पक्राउ परे बराल ?
इटहरी । महिलाहरुलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले राजेश बरालाई पक्राउ गरेको छ । उनी विगत लामो समयदेखि इटहरीमा रहेर पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बधित छन् ।
बराललाई मध्यरातमा उनको घरबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बराल विरुद्व सुनसरीको धरान,इटहरी देखि मोरङको उर्लावारी सम्मका महिलाहरुको....
अमरदहबाट लाखौंको अबैध कपडा बरामद
मोरङ । मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका–५ स्थित अमरदह बजारबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा अबैध कपडासहित तस्करीमा संलग्न २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले करिव १७ लाख मूल्य बराबरको अबैध कपडा बरामद गरेको जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले डाइनिया हुँदै पथरीशनिश्चरेतर्फ मे १ च ४३०५....
पथरीबाट अजिङ्गरको उद्धार
पथरी । सेक्टर वन कार्यालय उर्लाबारी मोरङले एक अजिङ्गरलाई उद्धार गरि सुरक्षित स्थानमा छाडेको छ । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा स्थानीयबासीले भेट्टाएको अजिङ्गर सेक्टर वन कार्यालय उर्लाबारीका प्रेम विष्टले उद्धार गरेका थिए । सो अजिङ्गरलाई बेलबारीस्थित बेतना सीमसारमा छाडिएको छ । यो सहित १ महिनाको अवधिमा पथरीबाट....
​सेउती खोलामा अवैधरुपमा बालुवा–गीटि उत्खनन्
धरान । धरानस्थित सेउती खोलाबाट खोलाजन्य बस्तुको अवैध उत्खनन् हुने गरेको पाइएको छ । अनाधिकृतरुपमा स्काभेटर प्रयोग गरी नदी जन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् हुने गरेको हो । सरकारले मानववस्ती, पुल, मोटरबाटो, वन क्षेत्र र सार्बजनिक स्थलको ५ सय मिटर वरपर खोला उत्खनन्....
​पाँच बर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
उदयपुर । पाँच बर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा उदयपुर प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिका ३ पश्चिमटोल चाँपका १८ बर्षीय ध्रुव भनिने हेमबहादुर कार्की रहेका छन्। आईतबार साँझ बालिकाकी आमा घरवाहिर काम गरिरहेको बेला टभि हेर्दै गरेकी बालिकालाई कार्कीले बलात्कार....
बाढी पीडितकालागि बस्ती निर्माण गर्ने धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको घोषणा
इटहरी । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले बाढी पीडितका लागि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । चर्चित कलाकार तथा समाजसेवी सिताराम कट्टेले आइतबार कतारमा बाढी पीडितका लागि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
तराईका १२ जिल्लाका २३ स्थानमा फाउण्डेशनले राहत....
लुक्ला विमानस्थल अवरुद्ध हुँदा पर्यटक समस्या
सोलुखुम्बु । गएको पाँच दिनदेखि तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा उडान अवरुद्ध हुँदा पर्यटकहरुलाई समस्या परेको छ ।
बाक्लो हुस्सु र वर्षाका कारण गत बुधबारदेखि उडान अवरुद्ध भएपछि यात्रुहरु मारमा परेका हुन् ।
बुधबारदेखि उडान अवरुद्ध भएपनी शनिबार बिहान मौसम सफा हुँदा दुईवटा उडान....